မြားများ: April 2010
ပြောရရင် ဘယ်ကိုမှ ရောက်လိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး
မကြာမီ အတာသင်္ကြန် ကျရောက်တော့မည်.။ (သည်ဝါကျ အနည်းငယ် မှားယွင်း နေနိုင်ပါသည်)
သင်္ကြန် အကြောင်းစကား စလိုက်သည်မို့ ခါတော်မှီတခုခု လုပ်တော့မည်ဟု မြင်ကောင်း မြင်ပါလိမ့်မည်.။ ခါတော်မီ...ခါတော်မီ..ခါတော်မီ သီမဝေ့နိုင်ဘူး...အမိုက်တော ရေအလျဉ်မှာ......(ရှုပ်ကုန်ပါပြီ)။
သင်္ကြန် ဆိုသည်မှာ မြန်မာတို့၏ သိမှုဘောင် အတွင်းတွင် တန်းခူးလဟု အများအားဖြင့် လက်ခံထားကြသည်.။ သို့သော် ကာလ ရွေ့လျားလာသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ တန်ခူးလနှင့် မတိုက်ဆိုင်တော့ပါ.။ ကဆုန်လသို့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်.။ သင်္ကြန်နှင့် တွဲလျက် ပိတောက်ပန်းရော ဘယ်ဆီ ပုန်းရှောင်နေသည် မသိတော့ပါ။ မိုးဦးကျ နောက်ကျသောကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်.။
ကျွန်တော်၏ အိမ် မျက်စောင်းထိုးမှ ပိတောက်ပင်ကတော့ သစ်ခက် သစ်ရွက် တရွက် တလေမှ ရှိမနေသေးပါ။ အစ်မလတ် ကတော့ မနက် မနက် ရေလောင်းနေတာ တွေ့ပါသည်.။ ကျွန်တော့် အမြင်အရဆိုလျှင်တော့ ပိတောက်ပင်ကို ရေလောင်းမည့် အစား အိမ်ထောင့်မှ စံပယ်ပင်ကိုသာ ရေလောင်းစေချင်ပါသည်.။ စံပယ်ပန်းသည် မွှေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပိတောက်ပန်း၏ ညှီစို့စို့ အနံ့ကို ကျွန်တော် မွှေးမကြည့်သည်မှာ ကာလအတန်ကြာပြီ ဖြစ်သည်.။ ပိတောက်ပန်း ပွင့်လာခဲ့သည် ရှိစေ ကျွန်တော် မဆိုင်သလိုသာ နေလိုက်ပါဦးမည်။
သင်္ကြန်မို့ ဘာဖြစ်လဲ မေးလာလျှင် ထွေထွေ ထူးထူး ဘာမှ ပြောစရာ မရှိပါ.။ ကောင်မလေးတွေ စကတ် ပိုတိုလာပြီး လည် ပိုဟိုက်လာသည် ဟုသာ ပြောရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် တို့ ရွာမှ တောသူ တောင်သားများကတော့ ဘာမှ ထူးထုးခြားခြား မရှိလှပါ။ ခေတ်မီသော မြို့ကြီး ပြကြီးမှ အမျိုးကောင်းသမီးများ ကမ္ဘာကြီး၏ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းတွင် ယဉ်ကျေးမှုများ တိုးတိုက်မိရာက ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်.။ ထူးဆန်းသည်ဟု မဆိုသာပါ.။
သင်္ကြန်မို့ နီးလာလျှင် လူတချို့ ရုံးပိတ်ရက်ရှည် ပိတ်မှာမို့ ပျော်ကြသည်။ လူတချို့ ဘုရားဖူး ထွက်ဖို့ ပြင်ကြသည်။ လူတချို့ လျှောက်လည်ဖို့ ကားစီစဉ်ကြသည်။ လူတချို့ ဆယ်ရက် တရားစခန်းဝင်ဖို့ ပြင်ကြပြီ.။ လူတချို့ ဒုလ္လဘ၀တ်ဖို့ စာရင်း ပေးကြသည်.။ သင်္ကြန် အတွက် အားခဲနေကြသော သူတို့ကို ကြည့်ရသည်မှာ တမျိုးတော့ တမျိုး ဖြစ်သည်.။
မီဒီယာသမားများက သင်္ကြန် အကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ သတင်းထူးတွေ သတင်းဦးတွေ ရေးကြထည့်ကြသည်။ စီးပွားရေး သမားများက အမျိုးအမည် စုံလင်လှသော သင်္ကြန် ပစ္စည်း များကို တင်သွင်း ရောင်းချနေကြသည်။ အဓိပ္ပါယ်ရှာမတွေ့နိုင်သော(ကျွန်တော် လိုက်မမှီတာလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မည်) သင်္ကြန်တေးစီးရီးများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြို့မငြိမ်းကြီး၏ သီချင်းစာသားများက ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်၊ သင်္ကြန်မင်းသားကြီးဟု ခေါ်ဆိုကြသော ဦးဇော်ဝမ်းကြီးကတော့ ငြီးငွေ့ရှာလို့ ဖြစ်မည်.။ တမလွန်ကို သွားနှင့်ပြီ။(မှားယွင်းနိင်ပါသည်) သေသွားရှာပြီဟု ပြောလျှင်လည်း လုံလောက် လောက် ပါပြီ။
သင်္ကြန်တွင် ကကြဆိုကြသော ယိမ်းသမများကိုပင် သင်္ကြန်မယ် ဟု မခေါ်တော့ ။. ခေတ်စကားနှင့် April Queen ဟု အခေါ်အဝေါ်တွေ ပြောင်းလဲကုန်ပြီ.။ ဒိုးပတ်နှင့် သံချပ် သင်္ကြန် မဟုတ်တော့. ။ DJ Remix ဖြစ်ကုန်ပြီ.။
အားလုံး ကောင်းပါသည်ဟုပင် ပြောရမည်.။ မဟုတ်လျှင် ခေတ်နှင့် လိုက်မမှီသော အန်းတိခ်၊ အပြောင်းအလဲကို မကြိုဆို လက်မခံသော ကွန်ဆာဗေးတစ်ဟု ပြောကြလိမ့်မည်.။ တီဗီစခရင် ထက်မှာ ပေါင်လည်လောက် ရှိသော စကတ်နှင့် ရှင်မီးဟု ခေါ်သော ကြိုးသေးသေးလေး နှစ်ချောင်း ပုခုံးမှာ ချိတ်ထားသော (မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ဟု ပြောလျှင် ရိုင်းလွန်းသည်။ မိမနိုင် ဖမနိုင် ဟု ပြောလျှင်လည်း ခက်သည်။ ) အဆိုတော် အမျိုးသမီး ကောင်မလေး တယောက် တင် လှုပ်ပြရင်း ဘာတွေမှန်း မသိ ဟစ်အော်နေသည်။ (သည် အရေးအသား မျက်စိရှက်စရာ ဖြစ်သည်)
မီဒီယာ သမားကလည်း မီဒီယာ သမားမို့၊ စီးပွားရေး သမားကလည်း စီးပွားရေး သမားမို့၊ ပရိသတ်ကလည်း ပရိသတ်မို့ တော်တော့သည်။ မြန်မာပြည်သည် လုပ်ချင်တာ လုပ်၊ လျှောက်လုပ်၍ သင့်တော်သော အရပ်ဖြစ်သည် ထင်သည်။ သူ့ဟာနှင့်သူ အံကျ ဖြစ်နေသည်။ ပိုက်ဆံ ရှိလျှင် သာ၍ပင် သင့်တော်လိမ့်ဦးမည်.။
လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က နာမည် သိပ်မကြီးသေးသော ဆရာတော်ကြီး တပါး သင်္ကြန် ဆန့်ကျင်ရေး တရားတွေ ဟောခဲ့ဖူးသည်.။ သင်္ကြန် အတွက် ရေသုံးတာက ဘယ်လောက်၊ လောင်စာဆီဖိုး ဘယ်လောက် ဆိုပြီး တွက်ပြသွားတာ တော်တော်နိပ်သည်.။ ထိုတရားများဖြင့်ပင် ထိုဆရာတော် နာမည် ကြီးသွားသည်.။ ယခု ဘာသံမျှ မကြားရတော့.။ အောင်မြင် ကျော်ကြားသွားပြီ ဖြစ်၍ ထင်သည်။ မှန်သည်.။ မြန်မာပြည်တွင် ပထမ နာမည် ကြီးဖို့သာ အဓိက ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထို အောင်မြင် ကျော်ကြားမှုကို အသာအယာ အသုံးချကာ ရေလိုက် ငါးလိုက် နေသွားရုံ ဖြစ်သည်.။ တော်တော် အတွေးကောင်းကြသည်။
ဘာပဲ ပြောပြော အတာသင်္ကြန်ရောက်တော့မည်.။
ကြီးတော် တယောက်က သင်္ကြန် မင်း ဘယ်သွားမှာလဲ ဟု မေးသည်။ မုန့်ဖိုး ပဲဖိုးလေးများ ရမလားလို့ ဒုလ္လဘ ၀တ်မည်ဟု ညာဝါးလိုက်မိသည်။ ကြီးတော် ဘာပြောတယ် မှတ်သလဲ.။ `တနှစ်လုံး သောက်စား လာခဲ့ပြီးမှ ခုမှ ဆယ်ရက်လေး ကတုံးတုံးပြီး လူကြိးတွေကို ညာစား ဦးမလို့လား.။ တရားရိပ်သာက ထမင်းဟင်းစားတာ ဘယ်လောက် အပြစ်ကြီးတယ် မှတ်သလဲ တဲ့။ ရဟန်းဝတ်ပြီး လတ်လျားလတ်လျား လုပ်နေရင် မင်း စားနေတာတွေက မီးခဲတွေပဲ ဖြစ်နေလိမ့်မယ် တဲ့.။ ၀တ်မယ်ဆိုရင်လည်း တသက်လုံး ၀တ်လိုက်တဲ့။ ရွာဦးကျောင်းက ဆရာတော်ကြီးတောင် ငယ်ဖြူ လုပ်လာတာ။ ခုထိ သောတာပန် မတည်နိုင်သေးဘူး တဲ့။ မဂ်ပေါက် ဖိုလ်ပေါက်ဆို ဝေလာဝေး တဲ့.။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ် စရာ ရှိတာသာ လုပ် တဲ့.။ ဝေ့လည် ကြောင်ပတ်နဲ့ ဟိုဟို ဒီဒီ မလုပ်နဲ့ တဲ့ ။ (သည်းခံပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့ ကြီးတော်က တောသူ စစ်စစ် ဆိုတော့ ပြောလိုက်ရင် တုတ်ထိုး အိုးပေါက် အဲဒီ အတိုင်းပါပဲ ခင်ဗျာ..။ )
ထိုကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ သင်္ကြန်တွင် ဒုလ္လဘ ၀တ်မည့် အစီအစဉ် ဖျက်လိုက်ပါပြီ.။ မြို့ကြီးနေ သူငယ်ချင်းများဆီ ၀ီစကီ ကောင်းကောင်း မှာထားပါတယ်.။ ကျွန်တော့် ရွာကို လာလည်မည့် သူများကိုလည်း Dunfife ၀ီစကီ အစိမ်းရောင် တိုက်ပါမည်။ စတုဒိတာ သဘောမျိုး ပေါ့ ခင်ဗျာ..။
သင်္ကြန် ရောက်တော့မှာမို့ ခါတော်မှီ လိုလို မုခမှာ နုတ် ရေးလိုက်မိပါတယ်..။ (ဘလော့ကို ဘယ်လို ကျော်ရမှန်း မသိတော့လို့ ဒီမှာ ရေးရတာပါ.။ ဆိုင်မှာ ဆာဗာကနေ ပိတ်ထားပြီး ကျော်ပြီးသုံးရင် ဆိုင်က ခွင့်မပြုနိင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်.။ ) ပြောမယ့် ပြောတော့လည်း ဘယ်ကို မှ မရောက်ပါဘူး..။ အရက်သောက်တဲ့ အကြောင်းပဲ ဆိုက်သွားတဲ့ အတွက်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါ ဗျာ...။ အိမ်မှာ နားညည်းလို့ မုံရွာ လာနေတုန်းလေး လတ်ဆော့ပြီး အင်တာနက် သုံးရင်းကနေ တောင်ရောက် မြောက် ရောက် လျှောက် ရေးလိုက်တာ ပါ.။။။
အစကတည်းက ပြောပါတယ်..။ ပြောရရင် ဘယ်ကိုမှ ရောက်လိမ့်မှ မဟုတ်ဘူး လို့....။ ဟဲ ဟဲ...။